International Hotel Mashaariicda
Armati aad sheeg Low-Flow ku Rakiban Maydho: Noocyada, Faa'iidooyinka iyo Qiimaha
kulan-socodka Low ayaa loo xilsaaray sharciga Policy Energy Qaranka. kulan-socodka Low ayaa ku siin kara mulkiilaha la kayd muhiim ah oo ahaan qiyaasta waara ee hagaajay ama mashruuca dhismaha. kulan socodka Low sida musqulaha, samey, iyo madaxdii qubeyska, ku siin karaan utility isla marka la barbar dhigo kulan non-low-socodka.
socodka Low saarayaasha kulanka kala duwan ay technology isticmaalaa, Laakiin waxa ay ku siin karaan natiijada la mid ah, iyo habab cusub ayaa la horumariyey in la isticmaalo iyadoo kulan socodka hooseeyo.
Flow Low Madaxda Maydho
madaxdii Roob socodka Low waa kuwa heerka socodka ah ee ka yar 2.5 GPM cadaadiska biyaha pounds 80 per inch square (psi) a. Si kastaba ha ahaatee, madaxdii Roob socodka hooseeyo dhawaan xitaa ku siin karaan heerka socodka ah ee ka yar 2.0 GPM ah. The laba nooc aasaasiga ah ee socodka hooseeyo madaxdii qubeyska waa:
Laminar-socodka - madaxa Roob Laminar-socodka soo dhisi doono webiyo biya ah oo ay gacanta ku heerkulka badan oo sax ah ku siin doonaa.
Aerating - Noocan ah madaxa Roob socodka hooseeyo leh hawada la xirrira nooc ceeryaamo ah ee lagu buufiyo biyaha qaso biyo. Tani waxay abuuri doonaa qadar weyn ee uumi iyo qoyaan, iyo in cimiladu qoyan laguma talinayo.
madaxdii Roob socodka Low waa in lagu badalo kuwa ka weyn in la qorsheeyay iyada oo heerka socodka of GPM 5.5 ah.
Flow Musqulaha Low
musqulaha socodka Low iyo musqulaha socodka aalladda yar ayaa loogu talagalay in ay isticmaalaan lacagta biyaha musqulaha dhaqanka badh. musqulaha socodka Low yihiin celcelis ahaan 1.6 GPF, halkii 3.5 GPF.
design ee musqulaha low-socodka ayaa hoos dab sabab u ah sheegashada in lagu daydo qaar ka mid ah oo aan biyo kartaa musqusha si hufan. farsamooyinka Later iyo musqulaha waxqabadka ayaa la casriyeeyay si gargaarka dhibaatooyinkan, oo ay waxaa loogu talagalay, intooda badan, la qeybtii doorasho radi qashinka dareeraha ah iyo biyo ku buuxda asturidda qashinka adkaha ah.
musqulaha badan oo socodka hooseeyo ayaa sidoo kale loogu talagalay si loo yareeyo dhibaatooyinka xidhmin sababtoo ah marinka dheecaan waa ballaaran.
Cuf-Caal Low Flow Musqulaha - Noocan ah musqusha socodka hooseeyo isticmaalaa miisaanka dhaqanka oo biyo ah si ay u hoos ugu riixaynaa, maddiibadda. Waxay yihiin jaban iyo buuq badan ka yar in cadaadis lagu taageerayo musqulaha socodka hooseeyo.
Cadaadis-Caawiso Low Flow Musqulaha - Noocan ah musqusha socodka yar yahay sida caadiga ah waa noisier laakiin waxa uu yarayn karaa isticmaalka biyaha by 45% marka la barbar dhigo musqulaha cuf-quudin. Nidaamkan wuxuu isticmaalaa cadaadiska hawada dhisay gudaha taangiga si hoos ugu riixaynaa biyaha.
Maxaa About Furaha qasabadu?
qasabadaha Old saxanka sidoo kale lagu lumin karaa biyo badan iyo lacag. Waa in aad ka fiirsan bedelay qasabadaha haddii ay isticmaasho in ka badan 2.5GPM. Waxaa jira laba fikradaha in aad kala dooran karto si uu u bedelo in faucer dhacsan. Waxaad dooran kartaa in ay ku bedesho qasabada cusub, sida caadiga ah ka yar 1.5GPM ama ay ku rakibidda aerator ah. aerator ama socodka restrictir The lagu dari karaa si ku dhow qasabada kasta, in loo sameeyo beddelid sahlan oo raqiis ah in aad badbaadin doonaa qaar ka mid ah lacag sanadihii la soo dhaafay.
Faa'iidooyinka Qiimaha Isticmaalka Low Flow ku Rakiban
kulan-socodka Low dhab ahaan u baahan kartaa qaar ka mid ah kharashka ku wehlin doona dheeraad ah si ay u yeelo oo marka la barbar dhigo kulan dhaqameed.
Si kastaba ha ahaatee, tan iyo markii codes badan dhismaha u baahan in ay kulan socodka yar yahay, waxaan ku falanqeeyay sida qiimaha badan, kuwaas oo nooca kulan ku dari kartaa in soo jeedinta dhismaha aad doonaa. Iyada oo ku xidhan soo saaraha, musqul aasaasiga ah ku kici karaa inta u dhaxaysa $ 75 iyo $ 450, kaliya kulanka. A musqusha socodka hooseeyo si fudud ku kici kara oo ku saabsan $ 100 ka badan ku xiran tahay soo saaraha, laakiin ay bulshsada ee macaamiisha in ay noqon kartaa sida ugu dhakhsaha badan saddex sano ay sabab u tahay kaydka isticmaalka biyaha.
Rakiban Low-Flow Benefits
Fiican ee qalabyada
musqulaha-socodka Low badbaadin karo in ka badan saddex metritas 20,000 oo biyo ah halkii sanno qoyska ka mid ah afar xubnood
Available diyaariyeen balaadhan oo ah midabada iyo qaababka.
Nidaaminaya by Association Caalamiga ah ee biyuhu maraan iyo Farsamada Saraakiisha (IAPMO)
Waa in ay buuxiyaan ku haboon American National Institute Heerarka (ANSI)
musqulaha biyo-ool ah lacagta badbaadiyo on biilka biyaha bil walba.
Armati aad sheeg Sidee Dayactirka Common Water Dhibaatooyinka qasabada
qasabadaha biyaha Maanta ayaa noqday dheeraad ah oo casri ah, iyo hawsha ku rakibidda ama dhib qasabadaha, kuwaas oo uu noqday mid dhib badan. Habka si loo soo dajiyo qasabada biyaha xad waa hab la mid ah laakiin technology maanta ee keenaya qaybaha kala duwan in aad u baahan tahay in laga war hayo.
Common qasabada Arrimaha
Marka waxaa la xiran, arrimaha qaar ka mid ah waxay saamayn kartaa waxqabadka aad qasabadda, sida darroor, squeaks iyo dhibaatooyin kale.
Tagno arrimaha caadiga ah qaar ka mid ah iyo sida loo xaliyo badan.
Cadaadiska Water Low
Sida caadiga ah, cadaadis biyo yar ka qasabada biyaha ah waxaa keena diverter sprayer ay. waalka diverter waa cad yar oo ku yaalla gudaha jirka qasabada. diverter waxay ka talisaa biyaha galaan qasabada, sidaa darteed waa in aad hubiso in ay tahay mid nadiif ah-waxa laga yaabaa in dhaafiyay haraaga yar iyo macdan. Haddii diverter aan la dhaafiyay, waxaad u baahan kartaa in lagu badalo diverter ah.
Dhinac kale waxaad u Dhawdihiin inaad mujrim ah in cadaadiska biyaha ku yar yahay aerator ah. aerator sida diverter la nadiifin karin xal burush iyo nadiifinta ah. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa in la isticmaalo khal in meesha laga saaro qalab iyo waxa unclog.
Ugu dambeyntii, hubi in dhibaatada ma ahan cadaadiska biyaha ka utility ee ka soo baxay oo aad u hubiso in filtarka sahayda biyaha waxaa jidka oo dhan u soo jeestay.
ka qasabada buufin Misting
Haddii biyaha Delfin ceeryaamo ka flow ugu weyn marka aad isticmaasho qasabada, laga yaabaa in aad rabto in aad si aad u hubiso in aerator la xiri xidh.
Isticmaal maro ama buraash si loo soo saaro macdanta, cajalad ama qashin ka aerator ah, sida la dhaafiyay laga yaabaa. U hubso in aad sidoo kale hubi dhaqe aerator ah.
Dib aerator iyo mar kale hubi. Haddiise wali ay dhibaatadu kor u muujinaysaa waxaad u baahan doontaa in lagu badalo aerator sida ay u noqoto dillaac ama la waxyeeleeyey.
Qasabada biyaha gacanka deyneyso
Marka aad aragto in ay darroor qasabada biyaha, isku day adkaynaya lowska xirxirida ee riixo, maadaama ay tani waxay noqon kartaa sababta ugu weyn ee dillaac ah.
Mararka qaarkood a O-ring waxyeelo u baahan in la bedelay.
Si aad u badalo-ring O, xidhay off line biyaha, guuriso qasabada iyo bedelo kaydadka haddii loo baahdo, taas oo ku xidhan dhibaato ah in aad soo food saartay. Marka bedelay o hilqado, nadiifiso gudaha dareerka iyo dibadda ee jirka waalka. Waxa kale oo aanu ku talinaynaa cabbeeyo ee dareerka o-siddo la dufan silicone ku salaysan.
Shuba ka dareerka ah
Dhibaatada kale ee caadiga ah waa deyso ka dareerka qasabada. Haddii aad ku rakibidda qasabada style riixo ah, waxaad u baahan doontaa in lagu badalo dhaqe kursiga iyo / ama bedelo kursiga waalka.
Maxaa yeelay, dhammaan qasabadaha biyaha kale, waxaad u baahan tahay oo kaliya si uu u bedelo kursiga waalka.
Markii aad maqasho sanqadh ka dib marka aad dami qasabadda biyaha, waxa laga yaabaa in dubbe biyaha. Tani waxaa laga yaabaa in xalin by rakibidda qolkii cirka ah.
Haddii aad hore u rakiban qolalka hawada, dami biyaha, daadi line biyaha oo mar kale dib u biyo soo jeedin. Markay qayladii waxay dhacdaa ka dib markii qasabada biyaha la soo jeestay on, waalka u baahan tahay waxaa laga yaabaa dhaqe cusub, ama cadaadis biyo ka line sahayda waa mid aad u sareeya ama aad u hooseeyo.
Xamili qasabada adag tahay in la shaqeeyaan
Caadi ahaan adag ay ku shaqeeyaan inaanu laga yaabo in ay dhacaan, sababtoo ah korsiiya ama qashin ku burburay kaydadka ah.
Burburka, gogo 'biraha iyo macdanta dhaawici karta shaabaddii gudahood kaydadka ah.
Waxa kale oo laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay ugu bedesho kaydadka ama saliidayn leh dufan silicone ku salaysan. Ha isticmaalin dufan qasabada fasalka tuubiste ee, buufiyo Silicon ama jilciyaha kasta oo ku jiri kara batroolka. saliidaha Petroleum ku salaysan waxaa laga yaabaa in la shaabadood caag ah fal oo keeni kara in riixo si ka sii adag tahay in la shaqeeyaan noqday.
Armati bar aad u Hanuunin on Sida Loo Doorto biyuhu maraan ee Xuquuqda tuuboyinka
Waxaa jira noocyo badan oo tuubooyinka tuubooyinka dhismayaasha la deggan yahay ama ganacsi. tuubooyinka tuubooyinka sida PEX, Copper iyo PVC waxaa caadi ahaan loo isticmaalo iyagoo ku xidhan codsiga iyo meesha ay ku rakiban yihiin. Intaa waxaa dheer, waxaa jira qaar ka mid ah noocyada kale biibiile tuubooyinka sida madow, galvanized iyo naxaas. Aynu hoos ka eeg codsiga ugu fiican ee tuubooyinka tuubooyinka used ugu badan.
Dhuumaha ahama Steel
tuubooyin bir. Photo Hans Pixabay
ahama eegi kartaa mid aad u nidaamsan, laakiin waa tuubooyin bir aad u expensive.Stainless waxaa loo isticmaalaa in meelaha ku xiran daxalka iyo meel u dhow xeebaha. Noocan ah biibiile waa laga heli karaa labada dabacsan oo adag oo u baahan doontaa qaar ka mid ah laysku xidho gaar ah la siinayo noocyada kale ee tuubooyinka. Ha isku qaldin tuubooyinka ahama la tuubooyinka galvanized. Waa la heli karaa in tirada kala duwan iyo dhererka.
PEX kala cayncayn ah tuubooyinka. Photo Makdesignbuild.com
Pex tuubooyin waa tuubooyin dabacsan caag ah in uu noqday xulashada caanka ah ee codsiyada ganacsi la deggan yahay oo yaryar. Inkasta oo qiimaha bilowga ah wax yar ka sareeya, ay dayactir yar iyo habka rakibo si degdeg ah u biibiile ugu wanaagsan ee biyo qaybinta dhismaha gudihiisa ka dhigayaa. PEX tuubooyin bixisaa a runtii dillaac-free faa'iidooyinka qurbaan wax soo saarka badan tuubooyin naxaas. Mid ka mid ah cillado ugu muhiimsan waa in aan la isticmaali Karin in codsiyada dibadda sababtoo ah rays UV dhaawici karaa waa lakabka caag ah dibadda.More
Tuubooyin Copper loo adeegsaday in biyuhu maraan
copper nadiif ah ka dib markii ay la soo jaray. Photo Cedarcityrecycling.com
tuubooyinka Copper malaha waa biibiile ugu dhaqanka tuubooyinka loo isticmaalo ay sabab u tahay in ay muddo ballaaran iyo isku halaynta. Waxay bixiyaan iska caabin ah daxalka ka xoogbadan, wax weyn in loo isticmaalo biyaha kulul iyo qabow, iyo si fudud loo maarayn karo. Si kastaba ha ahaatee, arrin ugu muhiimsan si ay u eegaan ka hor inta la isticmaalayo tuubooyin copper waa in loo baahan yahay in la wada soldered oo waxay u baahan yihiin laga yaabo rakiban oo dheeraad ah. Ma aha qof kasta waa wanaagsan at tuubooyinka copper, kabida, laakiin maqaalka Sida loo Alxan Dhuumaha Copper aad ku caawin kara.
biibiile PVC. publicworksgroup Photo Flickr
tuubooyinka tuubooyinka PVC waxaa loo isticmaalaa biyo la cabbi karo iyo qabow iyo kulul sidoo la codsiyada wasakhda. tuubooyinka PVC kala duwan ay dhumucdiisuna iyo qaabeynta ku xiran codsiga halkaas oo waxa loo isticmaali doonaa. Tusaale ahaan, tuubooyinka biyaha cadaadis, ma aha kuwo la mid ah sida tuubooyinka bulaacadaha, oo aan isku mid ah sida kuwa lagu isticmaalay on nidaamka bullaacadaha duufaanka. waxyaabaha tuubooyinka caaga loogu talagalay codsiyada biyo la cabbi karo waxaa badanaa loo qoondeeyey la mid "NSF-PW" ama "NSF-61" si ay u muujiyaan in sheyga raacaysaa saamaynta caafimaadka shuruudaha NSF / ANSI Standard 6.
Dhuumaha biyuhu maraan ee galvanized
biibiile galvanized. Photo Home Depot
tuubooyin galvanized waxaa loo isticmaali jiray dhowr sano ka hor sida caadiga ah ee mashaariicda la deggan yahay. Si kastaba ha ahaatee, waqti waxaa loo adeegsanayaa yar sababtoo ah miridhku ku dhisi kartaa gudaha tuubooyinka dhexroor yar yar. Haddii biibiile duq ah oo ku filan, ka dibna waxaad arki kartaa biyo ka qasabada la raad miridhku ku socda sida baaxadda dabacsan gudaha biibiilaha way jebin kartaa. tuubooyinka galvanized loo isticmaali karaa in gaadiid biyo boor ama biyaha aan la cabin.
Dhuumaha naxaas ah u isticmaala in biyuhu maraan
tuubooyinka naxaas. Photo EugenesDIYDen Pixabay
tuubooyinka tuubooyinka naxaas bixiyaan tuubooyin iska caabin ah miridhku weyn, haddii waxa uu ka samaysan 67% in 85% copper. fasalka ugu fiican ee beebka naxaas ah waa la helay markii daawaha ku jira 85% copper iyo waxa loo yaqaan tuubooyin naxaas ah oo cas. tuubooyin naxaas bixisaa wax waara oo aan miridhku ee gudaha iyo waxa aanu sababa khasaare khilaaf gudaha biibiile. tuubooyinka tuubooyinka naxaas waa u fududahay in ay dunta badan tuubooyinka steel oo wanaagsan-biyaha kulul iyo nidaamka qaybinta waaweyn, sida qalabka bamka, taangiyada biyaha, iyo ceelal. tuubooyin naxaas ah sida caadiga ah u muuqdaan in ay muddo dheer ka badan wax kasta oo tuubooyinka kale. tuubooyin naxaas guud ahaan ku yimaado 12-foot dhererka toosan.
Tuur Iron tuubooyin
Tuur tuubooyin bir ah. Photo McWane, Inc.
tuubooyinka tuubooyinka tuura bir ah waxaa sida caadiga ah soo saaray sida nooca dawan-iyo-qasabad. Waxa kale oo laga heli karaa la-goysyada xidhnayn, laakiin waa ka qaalisan ee haddana dawan iyo mid qasabad. tuubooyinka Kuwanu waa ka culus tahay wax tuubooyinka kale, sida caadiga ah loo isticmaalo nidaamka qaybinta biyaha, ama dhulka hoostiisa rakibo sida biibiile ugu muhiimsan ee ku saabsan nidaamka bullaacadaha ama bulaacada. size ugu yar in sida caadiga ah waa manufactures waa 4 "biibiile, weyn oo ku filan in loo isticmaalo on codsiyada la deggan yahay. tuubooyin bir ah ku tuura waa culus yahay oo waa in lagu taageeraa inta aad soo shirin wadajir ah.
Armati aad sheeg Musqulaha: Talooyin Guide Iibsiga Musqusha
Musqulaha waa qalab aad muhiim u isticmaali joogto ah iyo mid ka mid ah xubnihii ugu baasi of musqusha. Dad badan oo ay diiradda saari doonaan waaskada ama wax aan waxba tarayn halkii diiradda musqusha. Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah musqulaha, sida dhaqanka heerka, yar yahay, dib u derbiga, derbiga sudhay, iyo qaar badan oo. Laakiin waa run ahaantii muhiim ah in la ogaado in musqulaha oo dhan ma aha kuwa musqulaha caadiga ah. Sidaas daraaddeed iska hubi our hage gadashada musqusha.
Musqusha Hagaha Iibsiga
guide gadashada musqusha Tani waxay kaa caawin doona ka hor inta aadan iibsan aad musqusha soo socda. Marka hubi inaad:
Go'aanso haddii aad doonaa in la isticmaalayo isku waslad ama laba gabal musqul
musqusha la xushay waa waa iyadoo raacaysa xeerarka maxalliga ah
Dooro nooca loo xirxiro
Cabir meesha bannaan ee la heli karo meesha musqusha lagu rakibi doonaa
Marka ay suurtogal tahay, isku day in aad musqusha ka magac ku tilmaamay iibsadaan
Go'aan ka dhexeeya baaquli musqusha wareeg ah ama elongated
Waxa intaa dheer in guide gadashada ah, sidoo kale tixgelin sheeyada muhiimka ah musqusha
Biyaha Saving- musqulaha Qaar ka mid ah ay dhici karto inay ka biyo shahaado dareen, musqulaha-oolnimada sare bafinayo galaan 1.28 ama ka yar halkii lagu saaqay, sida la galaan 1.6 ee musqulaha caadiga ah marka la barbar dhigo.
Dual Flush- Ma rabtaa in aad doorato musqusha in aad siin kara awood u leedahay in lagu saaqay qayb dareere ama biyo ka buuxa qashinka adkaha ah?
Musqusha musqulaha Bowl Height- raaxada waxaa loo tixgeliyaa sida musqulaha non-dhaqameedyada. A qar baaquli caadiga ah waxa uu ku yaalaa ku saabsan 15 inches kor ku dabaqa, laakiin musqulaha fijaan ee 17 inches waxaa loo arkaa kuwa ugu fiican. A inch 17 iyo xataa 19 musqusha inch height baaquli sidoo kale jiri doona waafaqsan Americans with Disabilities Act.
Bowl sawiray baaquli An elongated, inkasta oo degan meel dheeraad ah, meel fadhiga dheeraad ah oo kuu ogolaanaya ur yar in ay ka baxsadaan. Kan qaata tixgelin sida baaquli ah elongated noqon kartaa ilaa 6 "waqti ka badan baaquli caadiga ah.
Mid ka mid ah Piece musqulaha gabal Toilet- Laba waa ka raqiisan yihiin isku waslad, laakiin waxay u dabcaan ururtay ciidda ee u dhexeeya taangiga iyo maddiibadda. musqulaha One-piece waa qaali oo wuxuu noqon karaa mid adag si loo soo dajiyo badan musqusha laba-gabal. Sida qaab ay ku dhowaad waa isku mid.
flappers radi Systems- Rubber jira waxyaabo ee la soo dhaafay. Raadi munaaradaha radi cusub uu ka badan la isku halayn karo ka badan flappers jir. musqulaha Cadaadis-caawin waa flushers biyo-ool ah ka badan musqulaha cuf.
Valve- Taga ka dib markii musqusha in ay leeyihiin ugu yaraan inch 3 ah radi biiyaha. musqulaha dhaqanka leeyihiin waalka inch 2 in samatabbixiyey riixdaan ka yar kuwa cusub.
Rough-in Dimensions- Distance ka derbiga dib ugu soo galo line biyaha kala duwan model si ay u qaabeeyaan, sidaas darteed weydii ka hor inta aad ka hesho musqusha cusub.
Sawaxanka Noise- noqon karaan arimo marka musqusha la doonayo in lagu xiro meelaha gaadiidka sare.
Color- In ka badan boqolkiiba 80 ka dib cad dhaqanka go, inkastoo dad badan oo maalin kasta ay isku dayayaan midabada cusub qalaad.
Biyaha Lines- Isticmaalka khadadka biyaha ahama dabacsan halkii ama khadadka copper chrome-taxeen adag.
Valve- xidhay-Off Waxaa jira noocyo kala duwan ee xidhiidhada for waalka xidhan-off ah. xiriir Alxan iyo xiriir riixo ah kuwa ugu isticmaalay, laakiin hubi in aadan haysan tuubooyinka jir bir ah sida ay u baahan yihiin laga yaabo in sort qaar ka mid ah xiriir kala duwan.
Kuwanu waa saarayaasha musqusha top in aad ka heli karto dalka Maraykanka. Waxaa oo dhan waxay ku xiran tahay arrimo hore iyo inta lacag ee macmiilka waa diyaar u ah inay bixiso.
Toto-Toto waa mid ka mid ah 3 weyn ee saarayaasha musqusha
Kohler- Kohler bixisaa alaabta aad u fiican sicir macquul ah.
Standard-Waayo American qiimaha saafi ah, musqusha Standard American waa tartan istaahilo.
Armati aad bar Dhererka tuwaalka Rakibaadda Bar Oo Accessories kale Bath
Ring shukumaan iyo Accessories Musqusha kale Heights Rakibaadda
accessories Musqusha sida caadiga ah waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu danbeeyay ee lagu rakibi markii habeynin ama inta ay socoto dhismaha. Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan aqoon sida iyo meesha si loo soo dajiyo accessories musqusha, ka dibna aad u ordi karaan dhibaatooyin waaweyn karin sida aad la qodista ka badan dusiyeen keenaya waxyeelo by qodista loo baahnayn. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah meelaha lagu talinayaa in aad isticmaali karto markii rakibidda accessories musqusha.
had iyo jeer Xasuuso inaad ku labanlaabtaa la tasho xeerarka u yaala dhismeyaasha hoose iyo tilmaamaha ADA.
Qaar badan oo ka mid ah meelaha lagu talinayaa waxaa laga qaadaa Residential Xeerka Caalamiga ah (IRC), shuruudaha Americans with Disabilities Act oo la daabacay by Association Jikada & Bath Qaranka.
Standard Mirror Rakibaadda Dhererka
Muraayadaha lagu rakibi karo at height a kala duwan taas oo ku xidhan nooca muraayad lagu rakibay. Sida ku qoran xeerka guud, waxay lagu rakibi laga yaabaa in inta u dhaxaysa 38 iyo 42 inches. Cabiraadda waxaa loo la xiriira height hoose ee muraayada, dabaqa dhameysatay qiyaasay. My talo waa in muraayad lagu rakibayaa doonaan laayeen hoose ee dusha ka tarjumaysa ma ka badan 40 inches kor ku dabaqa dhamaysto. Mararka qaarkood waxaad u baahan doontaa in xarunta muraayad la derbiga iyo wax aan waxba tarayn oo ah ujeedooyinka bilicsanaanta. Waxaa lagu talinayaa si loo soo dajiyo hal muraayad dhererka-buuxa ah ee musqusha kasta marka qubeyska waxaa loo isticmaali doonaa by dadweynaha.
Dhererka Rakibaadda for Shelefyada Musqusha
Armaajo waxa loo xiraa ee sarreeya kala duwan taas oo ku xidhan isticmaalka iyo nooca shelf lagu rakibay. Sida caadiga ah ka dibna lagu rakibi karo dhexeeya 3 cagaha iyo 4 cagaha aad, sida mirrors.However, this kala duwan yihiin iyada oo ku xidhan nooca musqulaha iyo uu jiro isbeddel cusub si ay u leeyihiin niches halkii armaajo.
Musqusha Accessories rakiban: setelayt Saabuun / qaybiyaha Saabuun
saxan saabuun The waa in lagu dhejiyaa at height ah qiyaastii 44 inches ama u sarraysaa sida 54 inches. Meesha saabuunta weelka height ku yaalaan waa inaydaan ka bixin buufiyo qubeyska. Iyadoo qaybiyaha saabuun ah waa in lagu dhejiyaa ugu yaraan 40 inches iyo sidii sare sida 48 inches. Sida habboon saxan saabuun ah lagu rakibi doonaa 48 inches, Si kastaba ha ahaatee, haddii ay saabuun qaybiyaha ah, badhamada riix waa in loo maleyaa 44 "badnaan kor FF.
Shukumaan Rakibaadda Ring Dhererka
giraanta shukumaan The waa in lagu dhejiyaa dhexeeya 50 inches iyo 52 inches height, dabaqa dhameysatay qiyaasay. Haddii aad u qiyaaso ka wax aan waxba tarayn ka dibna waa la sudhay doonaan inches 20-22 ka sarreeyo. Guud ahaan, sarajooggiisuna buuxda ugu yaraan waa 36 "waayo, shukumaanada, 18" waayo, dharka lagu dhaqo ka countertop wax aan waxba tarayn loo qiyaasi karin.
xirxiro height tareenka shukumaan kala duwan yihiin iyada oo ku xidhan nooca iyo isticmaalka musqusha. rail ma lagu rakibi doonaa at height isku mid ah marka musqusha loo isticmaali doonaa by carruurta. tareenka shukumaan A lagu rakibi doonaa 48 inches kor dabaqa. Aad rabto in aad sidoo kale si uu u hubiyo meesha korontada iyo shaqada leben madaxtooyada. Marka rakibidda biraha shukumaan badan, cabbiro mid ka mid ah in uu noqon doono ugu sareeya, ka dibna isku laab shukumaan heerkaas.
Mark 2 inches hoos meesha ugu hooseysa tuwaalka iyo in waa in ay meesha si loo soo dajiyo tareenka labaad.
Musqusha Paper Roll Dhererka Holder?
haystaha duudduuban waraaqaha musqusha ayaa lagu rakibi karaa inta u dhaxaysa inches 19 iyo 26 dabaqa. Americans with Disabilities Act ayaa ku dhiiri isticmaalaya 19 inches halka Association Jikada & Bath National waxay ku talineysaa 26 inches sida height ku haboon. Haddii aadan haysan wax badan oo ka mid ah meel aad, waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad ka fiirsan waxaa soo lifaaqaaya in ay dhinaca wax aan waxba tarayn ah.
Accessories Musqusha rakiban: Golaha Wasiirada
armaajooyinka Musqusha waxaa caadi ahaan lagu rakibay 54 inches kor ku dabaqa dhammeeyey. Saas waxaa ugu wacan in aad sida caadiga ah waxay yeelan doonaan a 36 inches wax aan waxba tarayn caadiga ah lagu daray 18 inches of meel cad ee u dhexeeya. Mararka qaar isku-dar ah muraayad / golaha wasiirada waxaa loo doortay si loo hubiyo in in ay u rakibay 12 inches on top of countertop ah.
Musqusha rakiban Accessories: Biraha gidaarada
biraha la qabsado waa in lagu rakibaa ugu yaraan 33 "-36" kor dabaqa. Marka la rakibo waa on derbiga dhinaca bar gidaarada noqon doonaan 42 inches ugu yaraan muddo dheer, oo ku yaalla 12 inches ugu badnaan ka derbiga gadaal iyo kordhin 54 inches ka wall.There danbe waa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida si loo soo dajiyo bar qabsado, sida ay ku taliyeen Maraykanka with Disabilities Act maqaal ku saabsan biraha la qabsado.
Dhererka Rakibaadda for Hand qalajiya
qalajiya gacanta ku leeyihiin qaar ka mid ah tilmaamaha dheeraad ah oo gaar ah, sida ay noqon waa in ay si fudud ku shaqeeya codsanaya unugyada force.These ugu yar oo keliya la kulmi doonaan dhinacyada ADA gaar ah in loo eego sida ay u taag karo iyo waa in laga midab imaanayn awoodaan. button riix waa in la rakibay 38 inji ka sare FF iyada oo ugu yaraan meel dabaqa nadiif ah 30 "x 48" horteeda them.When qalajiyaha ka badan hal gacan la geliyo, unit labaad lagu rakibi karo dhexeeya 42 "-48" kor ku dabaqa dhammaadeen.
Armati aad bar Sida loo Refinish qabeyska
La socodsii musqusha by dhiig rinjiga on xamaamka.
Nature in Iyadoo Maydho ah Bannaanka ha
tiixo dibadeed ee ma aha kuwa xaqa, waayo, poolside iyo xeebaha dadweyne dambe. Waxa ay u soomi noqday intaas dheer a cabdo musqusha guriga maalin kasta.
Armati aad bar anatomy ee qabeyska iyo Sida loo rakib Bedelida a
Baro dhan oo ku saabsan qubeysto ay ka mid yihiin sidii ay u soo saarto iyo bedelo mid.
Armati aad bar Sida loo rakibo Anti-duba Madax
Jooji isbedel heerkulka biyaha qubayska lama filaan ah ay ku rakibidda waalka anti-gubto ah ee qubeyska.
Armati aad bar Sida loo rakib Maydho Corner ah
Tani kit Roob is haysta weli iminka bilaash kartaa meel qubeyska yar.